‘ललितपुरको विकाशका लागि गम्भिर बहस चलाउनुपर्छ’ « Lalitpur Khabar
पुरुषोत्तम आचार्य ललितपुरको आठौं अधिवेशनबाट भर्खरै अध्यक्षमा निर्वाचित भएका छन् । विद्यार्थी आन्दोलनबाट राजनीतिक यात्रा सुरु गरेका आचार्य युवा जोस र जाँग्रका साथ केहि दिन अघि नेतृत्व सम्हालेका छन् । उनै अध्यक्ष आचार्यसँग हामीलेललितपुरको राजनीति र विकाशका सन्दर्भमा छलफल गरेका छौं । प्रस्तुत छ फलफलको सम्पादित अंश :
तपाईको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिती निर्वाचित भएको छ । अव एमाले ललितपुरको नयाँ कार्यसमितीले कसरी राजनीतिक यात्रा सुरु गर्छ ?
कतिपय महत्वपूर्ण पुराना कार्यक्रमहरु हामी अनुसरण गर्छौ । तर अवको यात्रा हाम्रो नयाँ ढंगले सुरु हुनेछ । जिल्ला कमिटी, पालिका कमिटी, पार्टी केन्द्र ,प्रदेशका मित्रहरुको भावनालाई बुझेर निर्णयहरु अपनत्व हुने गरी काम गर्नेछौं ।
ललितपुरमा नेकपा एमाले २०७४ सालको निर्वाचनमा पहिलो पार्टीको रुपमा स्थापित भएको थियो । २०७९ सालको निर्वाचनमा पनि हामी पहिलो पार्टी हुनेछौं ।
हामी सबै पार्टीका जिम्मेवार पदाधिकारीहरु राखेर क्यालेण्डर बनाउछौं । यो वर्क सेडुअल नै हुनेछ । ती योजना बनाउदा सबै तहका नेताहरु राखेर वर्कशप गर्नेछौं । हाम्रो पहिलो बैठकले ३ महिनाको क्यालेण्डर पास गर्नेछ ।
निर्वाचन नजिकिदैछ, निर्वाचन केन्द्रित योजना के छन् ?
गाँउमा गएर साधारण पढे लेख नगरेका स्थानीयहरुलाई निर्वाचनको अवधि सोधे उहाँहरुले ५ बर्ष भन्नु हुन्छ । कानून नजाने पनि लेखपढ नगर्नेले पनि यो कुरा भन्नु हुन्छ ।
तर यो सरकार सकेसम्म ५ बर्ष पुरा भए पनि निर्वाचनकाट कसरी भाग्ने निर्वाचनमा भन्नेमा लागेको छ ।
एक्ला एक्लै जाँदा एमालेले जितिहाल्छ । अरु पार्टीसँगगठबन्धन गर्दा अहिले आफूले खाइपाई आएको सुविधा छोड्नु पर्ने हुन्छ । अपहत्ये नै थियो नेपाली काँग्रेसलाई पनि । किनभने काँग्रेससँग प्रतिश्पर्धामा नेकपा एमाले नै छ ।
अहिले बनेका नेकपा एकीकृत र माओवादीको विषय त प्रतिश्पर्धाको छलफलको विषय नै हुँदैन । काँग्रेसले गठबन्धन गरिदिएन भने उनीहरुको विषयमा छलफल हुँदैन । त्यसैले गठबन्धन गर्नुपर्छ । गठबन्धन गरेर जानुपर्छ उहाँहरु भनिरहन’ भएको छ । त्यो गठबन्धन देशका निम्ति होइन र जनताको निम्ति होइन । त्यो उहाँहरुको व्यक्तिगत स्वार्थका लागि ।
तर पनि नेकपा एमालेले एक महिना अगाडिदेखि तोकिएकै समयमा निर्वाचन हुनुपर्छ । यो वा त्यो बाहानामा निर्वाचन रोक्ने होइन । समयमै निर्वाचन हुनुपर्छ भनेर नेकपा एमालेले भनेको छ ।
एमालेले जनसँगठनले भर्खरै मिटिङ बसेर समयमै निर्वाचन भएन भने आन्दोलन गर्न तयार रहनुपर्छ भनेर अघि बढेको छ ।
एमालेका कतिपय जिल्लामा जनसंगठनले मसाल जुलुस, प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र पठाउन थालेको छ । हामी ललितपुर, भक्तपुर र काठमाडौंका जिल्ला अध्यक्षहरु बैठक बसेर समयमै निर्वाचन हुनुपर्छ भनेर लागेका छौं ।
नाम मात्रको गठबन्धनले जनदवादपछि निर्वाचन गराउन सरकारलाई सुझाव दिने भन्ने सुन्नमा आएको छ । यदि निर्वाचन भयो भने हामी ललितपुरको ६ वटै पालिकामा जिताउन हाम्रो कमिटी अगाडि बढ्छ ।
हामीले तलका कमिटीहरुसँग बसेर कुरा गर्दा एमालेले राष्ट्रियताको अडान ठिक छ । सरकामा हुँदा एमालेले काम गरेको छ,जनजीविकामा लिएको लडानका कारण एमालेले जित्छ भन्नु भएको छ ।
एमालेले ललितपुरमा गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा जान्छ कि ?
राजनीतिमा असम्भव भन्ने त छैन । तर यो पटक हामी गठबन्धन गरेर होइन एक्लै निर्वाचनमा जादैछौं । भिन्न कार्यशैलीबाट आएका साथीहरुसँग पार्टी एकता गर्दा हामीले अधिल्लो पटक एकता टिक्न सकेन ।
निश्चित स्वार्थ रहेछ साथीहरुको । नेकपा एमालेलाई एकपटक बहुमत दिनुस् केपी ओलीको नेतृत्वमा सुरु गरेको काम हामी पुरा गछौं भनेर निर्वाचनमा जान्छौं । सुखी नेपाली, समृद्ध नेपालको नारा लिएर निर्वाचनमा जान्छौं ।
एमालेविरुद्ध गठबन्द्धन किन बन्यो होला । गठबन्द्धनलाई जनताले कसरी लिएका छन् ?
गठबन्धन लोभि र पापीहरुको झुण्ड हो । अहिले लोभीलाई लोभमा र पापीलाई पापमा फसाएर त्यो गठबन्धन निर्माण भएको छ । स्वार्थ समूह थिएन भने तपाई नै भन्नुस् । महाकालीमा जयसिंह धामी बेपत्ता हुँदा चुसम्म बोल्न सक्यो यो सरकार ।
महाकालीमै तट बन्धन निर्माण भइरहेको छ । नेपाली भूमि जलमग्न हुँदैछ । जनताको पक्षमा गठबन्धन छैन । धेरै प्रश्नहरु छन् ।
यो गठबन्धन विकाशका निम्ति होइन । यो गठबन्धन देशका निम्ति होइन । यो विदेशीहरुका इशारामा निर्माण भएको कठपुतली सरकार होे । जनताले गठबन्धनलाई धुलो चटाउछन्
उहाँहरु गठबन्धन लिएर जानु हुन्छ । हामी एक्लै जनतामा जान्छौं । हामी जनताका बीचमा गरेका कामहरु लिएर जान्छौं । एमालेले काम गरेको छैन भन्ने अवस्था त छैन । जनताले एमालेले ठिक काम गरेको छैन भन्ने अवस्था छैन ।
पार्टी फुटेकै अवस्थामा गठबन्धनसँग एक्लै लड्दा एमालेलाई पराजय हुने जोखिम हुँदैन ?
पार्टी फुटेको छ भनेर बाहिर हामी जति चर्चा गछौं । तपाईसँग बहस नै चलाऔं । ललितपुरको महाँकालमा नेकपा एमालेका सबै निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु कही जानु भएको छैन । वागमतीमा,कोञ्ज्योसोम, गोदावरीमा कुनै जनप्रतिनिधिहरु अरु पार्टीमा जानु भएको छैन ।
ललितपुर महानगरमा केही साथीहरु जानु भएको छ । तर त्यहा रहेका हुलका हुल साथीहरु पार्टी कार्यालयमा आएर छोडेर गएका गलत मान्छेहरुलाइ ल्याएर गल्ती नगर्न भनिरहेका छन् उहाँहरु हामी पहिले जितेको भन्दा धेरै मत ल्याएर फेरि जित्दैछौं भनिरहनु भएको छ ।
हो नेकपा एमालेमा लामो समय काम गर्नु भएको केही साथीहरु जानु भएको छ । एउटा जिवन्त संगठनमा आउने जाने क्रम चलि नै रहन्छ । जाने संख्या सानो छ । आउने संख्या ठूलो छ ।
निर्वाचनमा टिकट नपाउदा पार्टी छोड्ने र टिकट पाए बसेर काम गर्ने नेताहरुको प्रवृति मौलाइरहेको छ । टिकट दिने मापदण्ड चाँही कस्तो हुन्छ ?
टिकटको बारेमा अहिले धेरै छलफल नचलाउऔं । टिकटका बारेमा निरन्तर काम गरिरहनु भएका योग्य क्षमतावान् साथीहरुले उम्मेदवारी पाउनुहुन्छ । टिकट पाउनका निमित्त पार्टीको केन्द्र, प्रदेश र जिल्लाले एउटा मापदण्ड बनाउछ । त्यही मापदण्डका आधारमा पार्टीले टिकट दिन्छ । हाम्रो झस्केलाबाट टिकट दिदैन । योग्यतम साथीहरुमध्येबाटै टिकट पाउनु हुन्छ ।
एमालेबाट अरु पार्टीमा नेताहरु गइरहेको अवस्थामा अन्य पार्टीबाट एमालेमा आउने अवस्था छ कि छैन ?
विगतमा नेकपा एमालेबाट छोडर जाने साथीहरुसँग कुराकानी भइरहेको छ । उहाँहरुसँग संवादहरु च्लिरहेको छ । उहाँहरुसँग सकारात्मक कुरा भइरहेको छ । नेपाली काँग्रेस नजिक भएका योग्यतम राम्रा साथीहरुसँग कुराकानी भइरहेको छ । माओवादी पार्टीका कतिपय साथीहरु पनि एमालेमा आउन कुराकानी गरिरहनु भएको छ । उहाँहरुलाई जिम्मेवारी दिने विषयमा पार्टीले सोच्छ ।
एमालेबाट छोडेर जाने साथीहरुको विषय पनि यससँगै जोडिन्छ । उहाँहरुका विषयमा धेरै कमेन्ट नगरौं । उहाँहरु गठबन्धनको लोभ र मोहमा फस्नु भएको देखिएको छ । तर चौटा खान गएकी बुढी झोलमा डुबेर मरी भने जस्तै अवस्था हुन्छ ।
जिल्ला अधिवेशनका क्रममा एमालेभित्र केही नेताहरु असन्तुष्ट पनि देखिएका छन् । उहाँहरुलाई आगामी दिनमा कसरी उहाँहरुलाई समेटेर अघि बढ्नु हुन्छ ?
पार्टी एकतामा क्रममा ठूलो कमिटी बनाइएको थियो । कतिपय साथीहरु जिल्ला कमिटीमा अट्नु भएको छैन । उहाँहरुलाई प्रदेश,सल्लाहकार कमिटी,केन्द्रिय विभाग र प्रदेश विभागमा पाठउछौं । उहाँहरुको योग्यता र क्षमताको आधारमा उपर्युक्त जिम्मेवारी दिन्छौं । यी सबै सोहार्दपूर्वक नै भएका छन् ।
कतिपय साथीहरु एमालेभित्र केही असन्तुष्ट हुन्छन् र ती असन्तुष्टहरुलाई आफ्नो डोकोमा हालौला भनेर बसेका छन् । उहाँहरुको आशा निराशामा परिणत हुनेछ ।
नेकपा एमाले ललितपुरले कस्तो योजना अघि सारेर निर्वाचनमा जादैछ ?
राज्यले निर्वाचनको मिती घोषणा गरेपछि हामी ललितपुरमा नेकपा एमालेले के गर्छ भन्ने कुरा घोषणापत्र मार्फत लिएर आउनेछौं ।
लामो समय सरकारमा रहेको एमालेले ललितपुरको विकाश किन हुन सकेन ? अव के गर्नु पर्ला ?
ललितपुर निर्माणको कोणबाट हामीले अलि गम्भिर बहस चलाउनु पर्ने अवस्था छ । राजधानीसँग जोडिएको जिल्ला ललितपुरमा अmभैm बाटोकै समस्या छ । कान्तिलोकपथ,लेले चन्दनपुर,मध्यमार्गी, बगुवा कोलेश्वर सडक कालोपत्र गर्नु पर्नेछ । सबै स्थानीय निकायमा अस्पताल निर्माण गर्नु पर्नेछ । शिक्षालयमा पनि ललितपुरमा प्राविधिक शिक्षालय स्थापना गर्नु पर्नेछ ।
सातदोवाटोबाट कोटेश्वर, महालक्ष्मी नगरबाट लगनखेल आउदा ३ घण्टा जाममा बस्नुपर्छ । सातदोबाटो एकान्तकुनाको अवस्था उस्तै छ । विगतमै सुरु हुनु पर्ने फ्लाईओभर सुरु भएको छैन ।
काठको सडकको अवस्था पनि उस्तै छ । ढुकुछापलाई पहाड भन्ने कि काँठ भन्ने ? चापागाँउबाट छम्पी जान कि लेले पुगेर जानुपर्छ कि सातदोबाटो हुँदै । सँगै जोडिएको नगरपालिकाको केन्द्रबाट जान यति गाह्रो छ । गम्भिर भएर सोच्ने कि नसोच्ने ?
एकातिर खानी संचालन भइरहेको छ । अर्कोतिर अनुमती लिइएको छैन । कि खानी क्षेत्र घोषणा गर्नु प¥यो । बस्तीलाई सार्नु प¥यो ।
ललितपुरमा विभिन्न क्षेत्रलाई पकेट क्षेत्र घोषणा गर्न जरुरी छ ।
ललितपुरको विकाशमा सञ्चारको भूमिका कस्तो रहला । ललितपुरमा केन्द्रको सञ्चारमाध्यमहरुको प्रभाव रहने तर ललितपुरको विकाश प्रयासमा सहयोगी भूमिका देखिदैन । स्थानीय विकाश प्रयासका लागि यहाँका स्थानीय संचारमाध्यमहरुको विकाशका लागि तपाईहरुको भूमिका कस्तो हुन्छ ?
संचारको क्षेत्रका सन्दर्भमा छलफल चलाउनु पर्ने अवस्था देखिएको छ । मिडियाले ललितपुरलाई चिन्दैन कि देख्दैन ? यहाँ ललितपुरमा मिडिया चलाएर बसेका साथीहरु पनि हुनुहुन्छ । तर दुखका साथ भन्नुपर्छ ललितपुरका ठूला गतिविधिहरु भयो भने ठूला नेताहरु आउनु भयो भने मिडियाले ललितपुरलाई प्राथमिकता नै दिदैन । काठमाडौंमा कार्यक्रम भयो भने मिडियाहरु टन्नै उपस्थित हुने तर ललितपुरमा मिडियाको उपस्थिती नै देखिदैन ।
यसमा २ कोणबाट छलफल चलेको पाए । एउटा ललितपुरमा रहेर काम गर्ने साथीहरुलाई व्यावसायिक बनाउन सकिएको छैन रहेछ । अर्कोतर्फ काठमाडौंका मिडियाहरुबाट डोमिनेट हुने अवस्था रहेको छ । यहाँको गतिविधिहरुलाई मिडियाले त्यती महत्व नदिने अवस्था छ । उहाँको गतिविधिहरुलाई त्यती धेरै स्थान नदिने अवस्था छ । यसको ललितपुर खबरले अगुवाई गर्नेछ भन्ने मैले अपेक्षा लिएको छु ।